Guddoomiyihii gobolka Nugaal oo lagu aasay Garoowe - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandGuddoomiyihii gobolka Nugaal oo lagu aasay Garoowe
March 30, 2020 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Salaada jinaasada guddoomiyihii gobolka Nugaal. [Isha Sawirka: Puntland State House]
Garoowe-(Puntland Mirror) Guddoomiyihii gobolka Nugaal ayaa maanta oo Isniin ah lagu aasay qabuuro kuyaala magaalada Garoowe.
Cabdisalaam Xasan Xirsi oo loo yaqiin Gujir ayaa u geeriyooday dhaawac kasoo gaaray kadib weerar ismiidaamin ah oo lagu beegsaday gudaha magaalada Garoowe fiidnimadii Axada.
Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullahi Deni iyo labo madaxweyne oo kale ayaa ka qeybgalay munaasibad aas ah oo loo sameeyay guddoomiyaha.
Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa sheegatay masuuliyada weerarkaas, oo ay ku dhaawaacmeen ilaa labo qof oo kale.
Al-Shabaab oo toogasho ku fulisay lix nin oo ay ku eedeeyeen basaasnimo
Muqdisho-(Puntland Mirror) Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa qabsatay magaalo istiraatiiji ah oo ku dhow xadka Kenya iyo Soomaaliya, sida ay sheegeen dadka deegaanka. Dadka deegaanka Ceel-waaq oo la hadlay warsidaha Puntland Mirror ayaa sheegay in dagaalyahano aad [...]